समाचार - फ्लोर सकेट के हो?
फ्लोर सकेट भनेको के हो?
एउटा फ्लोर सकेट एक प्लग रिसेप्टर हो जुन भुईँमा अवस्थित हुन्छ। यस प्रकारको सकेट प्लगको विस्तृत प्रकारका लागि बन्न सकिन्छ, तर प्राय: बिजुली, टेलिफोन, वा केबल जडानको लागि प्रयोग गरिन्छ। फ्लोर सकेटको प्रयोग धेरै क्षेत्रहरूमा निर्माण कोड द्वारा भारी विनियमित हुन्छ।
इलेक्ट्रिकल सकेट वा आउटलेटहरू प्राय जसो भित्ताहरूमा अवस्थित हुन्छन्।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, विद्युतीय र अन्य प्रकारको सकेटहरू वा आउटलेटहरू पर्खाल वा बेसबोर्डहरूमा अवस्थित छन्। एक मानक आवासीय वा वाणिज्य कोठामा, त्यस्ता सकेटहरू सामान्यतया भुइँबाट केही दूरीमा अवस्थित हुन्छन् र बाथरूम र भान्छामा काउन्टर शीर्षहरू माथि राख्न सकिन्छ। मानक औद्योगिक निर्माणमा, प्रायः त्यस्ता आउटलेटहरू या त भित्तामा वा मेसिनरीको नजिकको खम्बामा राखिन्छन्। केहि अवस्थाहरूमा, तथापि, एउटा फ्लोर सकेट वांछनीय छ किनकि यसले ती ठाउँहरूमा डोरीहरू चलाउन रोक्दछ जहाँ उनीहरूले यात्रामा खतरा निम्त्याउन सक्दछन्।
उदाहरण को लागी, एक आवासीय बैठक कोठा को आकार यस्तो हुन सक्छ कि पलंग पर्खालहरु मा राख्न को लागी अन्य कोठा मा प्रवेश अवरुद्ध बिना राख्न सकिन्छ। यदि घरमालिक सोफेको एक छेउमा पढ्ने बत्ती राख्न चाहन्छन् भने उसले भुईंमा कम्मर नजिकको विद्युतीय पर्खालमा चलाउनुपर्नेछ। यो अप्रिय हुन सक्छ। यो पनि खतरा हुन सक्छ कि घरपालुवा जनावर वा परिवारको सदस्यले डोरीमा यात्रा गर्दछ, जसले ट्रिपर र बत्ती दुवैलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। पलंगको नजिक फ्लोर सकेटको प्लेसमेन्टले यस समस्यालाई हटाउँछ।
सिक्काको फ्लिप साइड भनेको यो हो कि अनुचित रूपमा राखिएको भुई सकेटमा राखिएको प्लगहरू वास्तवमै यात्रा खतरा आफैं हुन सक्छ। यो विशेष गरी औद्योगिक र व्यावसायिक भवनहरूमा साँचो हो जहाँ दायित्व सधैं चासोको विषय हो। फ्लोर सकेटहरू पनि धेरैले सोच्दछ कि पर्खाल सकेट भन्दा ठूलो आगो जोखिम।
नयाँ निर्माणको क्रममा फ्लोर आउटलेटहरू स्थापना गर्नु संसारको केही भागहरूमा मुश्किल हुन सक्छ। धेरै निर्माण कोडहरूले पूर्ण रूपमा फ्लोर सकेटको स्थापनालाई निषेध गर्दछ। अरूले आदेश दिन्छ कि तिनीहरू केवल हार्ड फ्लोरमा मात्र स्थापना गरिएको छ जस्तै टाइल वा काठमा र नरम फर्शमा जस्तै कार्पेटि .मा छैनन्। अरूले फ्लोर आउटलेटहरूलाई औद्योगिक निर्माणमा अनुमति दिन्छ तर आवासीय वा व्यावसायिक निर्माणमा होइन, जबकि अन्यले ठीक विपरित रूपमा हुकुम गर्छन्।
विद्यमान भवनमा तार वा फ्लोर सकेट स्थापना गर्दा कोड द्वारा अनुमति हुन सक्छ वा हुन सक्दैन। यदि यो हो भने, कोडलाई काम इजाजतपत्र प्राप्त इलेक्ट्रिशियनले गर्न आवश्यक हुन सक्छ। यदि स्थानीय कोडले फ्लोर सकेट स्थापना गर्न अनुमति दिँदछ भने, भवन मालिकले बिर्सनु हुँदैन कि त्यस्तो स्थापना महँगो वा असम्भव हुन सक्छ यदि इलेक्ट्रीशियनले भुइँको अन्डरसाइड पहुँच गर्न सक्दैन, जस्तै क concrete्क्रीट फ्लोरहरूको मामलामा। यदि भुई दोस्रो स्तरमा छ भने, सकेटको स्थापना गर्न तलको छतको अंश हटाउनु पर्ने हुन सक्छ।